५ नं प्रदेशको राजधानी बुटवल वा दाङमै हुनुपर्छ भन्ने के छ ?
Monday, February 24, 2020 |सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६
५ नं प्रदेशको राजधानी बुटवल वा दाङमै हुनुपर्छ भन्ने के छ ? ५० वटा ऐन कानुन बने, अब बल्ल प्रदेशमा रफ्तारमा काम हुन्छ
जनतापाटी बुधवार, माघ १, २०७६, ११:०१:०० मा प्रकाशित
जिल्लामा ठूला नेताहरु हुंदा मध्यक्रमका इमान्दार र क्षमतावान नेताहरु कसरी ओझेलमा पर्छन भन्ने कुराको प्रमाण हुन्, कमल श्रेष्ठ । तत्कालिन एमालेबाट २०५१ मा गुल्मी २ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित श्रेष्ठ जिल्लाबाट गोकर्ण विष्ट र प्रदिप ज्ञवाली राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएपछि ओझेलमा मात्र परेनन्, त्यसयता संसदको टिकट नै पाएनन् । ‘विकासवादी र इमान्दार’ भनेर जिल्लाका प्रतिपक्षी नेताहरुले प्रशंसा गर्ने श्रेष्ठ २०७४ को निर्वाचनमा गुल्मीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ खबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका छन् । प्रस्तुत छ—श्रेष्ठसंग ५ नं प्रदेशको राजधानी तोक्ने बारेको विवाद, प्रदेश सभाको काम कारवाही लगायतका विषयमा जनता पाटीले गरेको कुराकानीको सारः
५ नं प्रदेशले अझै पनि नाम र राजधानी टुंग्याउन सकेन । सांच्चै महाभारत छ होइन, यो विषय ?
त्यस्तो महाभारत छैन । माघ ५ गतेदेखि प्रदेश सभा वैठक छ । त्यसले यो विषय टुंग्याउंछ ।
प्रदेश सभाले भन्दा पनि पार्टी हाइकमाण्ड त्यसमा पनि २ जना अध्यक्षले टुंग्याएपछि बल्ल नाम र राजधानी तोकिन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नी ? माथिबाट तपाईहरुलाई के आदेश गएको छ ?
३ नं प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्दा अलि बढी हो हल्ला भयो, पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो भन्ने हल्ला चल्यो । त्यसले गर्दा ५ नं पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने होला । अहिलेसम्म पार्टीले त्यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन र गर्नु पर्ने अवस्था पनि नआउला । किनकी ३ नं जस्तो हाम्रोमा नाममा कुनै विवाद छैन, राजधानीको बारेमा विभिन्न मतहरु आइरहेका छन् । त्यो पनि प्रकृयासम्मत ढंगले सहजरुपमै टुंगिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
स्पष्ट भनिदिनुस् राजधानी बुटवल र नाम लुम्बिनी हो भनेर ...
प्रदेश सभाले सांसद दिपेन्द्र पुनको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसपटकको प्रदेश सभा वैठकमा पेश होला । त्यसपछि बल्ल यसबारेमा स्पष्ट कुरा भन्न सकिन्छ । अरु तिरका प्राक्टिसहरु हेर्दा जहां अस्थायी राजधानी तोकियो, पछि त्यसैलाई स्थायी बनाइएको छ । त्यही आधारमा पक्कै पनि बुटवल नै हुन्छ भन्ने मानिसहरुलाई लागेको छ । तर, बुटवल नै भनेर टुंगो लागेको अवस्था होइन, राजधानी कहां हो र नाम के हो भन्ने बारेमा प्रदेश सभाले यसपटकको अधिबेशनबाट टुंगो लगाउंछ । नामको बारेमा भने खासै विवाद छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकी लुम्बिनी गलत हो भन्न कसैले सक्दैन ।
नेपालगन्जका मेयरले बरु कर्णालीमा मिसिन्छौं, तर बुटवललाई कुनै हालतले राजधानी मान्दैनौ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ, तपाईहरुकै पार्टीमै पनि त्यस्तो विवाद छ । यस्ले गर्दा राजधानीको विवाद त्यसै सकिने छांट त देखिदैन नी, होइन ?
कसैले यो ठाउं मान्छु र त्यो ठाउं मान्छु भन्दैमा हुने होइन । मलाई के लाग्छ भन्ने भन्दा पनि संवैधानिक प्रकृया के हो भन्ने कुरा बुझेर बोल्नु राम्रो हुन्छ । संविधानले नै प्रदेशहरुको सिमा निर्धारण गरेपछि अब यो प्रदेश होइन, त्यो प्रदेशमा जान्छु भनेर हुदैंन । संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सिमा हेरफेर गर्नु पर्यो, दुवै प्रदेशका जनता र प्रदेश सभाले स्विकृति दिनु पर्यो । त्यो संभव छ ? छ भने बल्ल यस्ता कुराको अर्थ रहन्छ, अन्यथा कानुन र प्रकृया सम्मत ढंगले जे हुनु पर्ने हो, त्यही अनुसार काम हुन्छ ।
तपाईको विचारमा राजधानीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउं कहां हो ?
प्रदेश सभाले बनाइएको संसदिय समितिले कुन ठाउंको लागि उपयुक्त देखेको छ, त्यो थाहा छैन् । किनकी प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, अहिलेसम्म २, ३ ठाउंको नाम चर्चामा छ । सबैभन्दा बढी उपयुक्त ठाउं भनेर बुटवल र दाङको नाम आएको छ । संसदमा बुटवल कि दाङ भनेर मतदान गर्ने हो भने कुनै ठाउंको लागि पनि दुई तिहाई मत पुग्ने अवस्था छैन । त्यसैले सहमतीको साथ यो विषय टुंग्याउनु विकल्प नै छैन । अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दांयावांया कतै हल्लिनु हुदैन, बुटवलमा पनि सबैभन्दा सेण्टर ट्राफिक चोक वा अमरपथ नै हुनु पर्छ भन्ने त हुदैनन नी । अवस्था हेरेर अनुकूल ठाउंमा हुनुपर्छ ।
राजधानी बुटवलमै हुनुपर्छ भनेर पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलले अनावश्यक अडान लिइरहनु भएको छ भन्ने तपाईको आसय हो ?
मेरो आसय कुनै नेताप्रति होइन, प्रकृया र अवस्था प्रति हो । राजधानी भनेको चलिहाल्छ, चलाउंदै भन्ने कुरा होइन । दीर्घकालिन रुपमा प्रदेशको भविश्यसंग जोडिएको कुरा हो, जनताको समृद्धिसंग जोडिएको कुरा हो । यस्तो विषयमा कसैले पनि अनावश्यक अडान लिने र घुर्की लगाइरहनु ठीक होइन भन्ने मेरो भनाई हो । बुटवल वा दाङ नै किन चाहियो ? दायां वायां वा यी दुईको बीचमा हुन किन नहुने ? मुख्य कुरा पूर्वाधारको संभावना हुनु पर्यो, जनताले अपनत्व महसुस गर्नु पर्यो ।
त्यसको अर्थ कपिलवस्तु सबैभन्दा उपयुक्त हो ?
बुटवल र दाङबाट पायक पर्ने, भौतिक पूर्वाधारको विकासको संभावना पनि छ भने त्यो ठाउं किन नहुने ? यहां भन्दा यता उता हुनै हुदैन भन्नु त भएन नी ।
बांके बर्दिया चांही जेसुकै होस ?
त्यस्तो होइन । तपाईले विश्वभरिका राजधानीहरु हेर्नुस् न बिच्चमा भन्ने त कंही पनि छैन । भारतको नक्सामा दिल्ली हेर्नुस त कहां छ ? विचमा छ ? लण्डन, वासिङटन लगायतका राजधानीहरु नै हेर्नुस् न विचमा त कुनै छैनन् । त्यसैले सबैलाई मिल्ने गरी ठीक्क विच्चैमा हुनुपर्छ भन्ने त हुंदैन । किनकी राजधानीको लागि ठाउं मात्रै त्यहांको अवस्था कस्तो छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । पहिले पो सबै काम राजधानीबाट हुन्थ्यो, त्यसैले ठीक विचमा राख्यो भने सबैलाई पायक पर्छ भन्ने हुन्थ्यो । अहिलेको विकास र प्रविधिको जमानामा कुनै पनि ठाउं अपायक हुदैन । सरर गाडीमा पुगिने भएपछि के को पायक, अपायक ? मुख्य कुरा भौतिक पूर्वाधार अहिले कस्तो छ ? र, भविश्यमा विकास हुने संभावना कस्तो छ भन्ने हो । त्यति भएपछि ठाउं जहां भए पनि हुन्छ ।
यो कुरालाई छोडिदिउं, प्रदेश सरकार र प्रदेशका सांसदहरुको काम प्रभावकारी हुन सकेका छैन भन्ने कुरालाई कसरी लिनु भएको छ ?
पहिले पहिले स्कुल जांदा बस्ने ठाउं नभएर घरबाटै गुन्द्रि लिएर गएर पढ्ने चलन थियो । पछि विस्तारै स्कुलहरु बने, कक्षा कोठा, बेन्च डेस्कहरु बने, अनि बल्ल पढाईको कुरा व्यवस्थित भयो । हामी प्रदेश सांसदहरु प्रदेश सभा हलमा छिर्दा गुरुकुलका विद्यार्थी जस्तै हालतमा थियौं । कहां वस्ने, कहां वैठक गर्ने, के को आधारमा वैठक गर्ने, के काम गर्ने ? केही टुंगो थिएन । त्यो सबै काम हामीले एक एक गरि टुंग्याउंदै गयौं । ऐन कानुनहरु बनाउने भनेको सजिलो काम होइन, हतारमा गरेर हुदैंन । एक एक कुराहरु मसिनो संग हेर्ने, विश्लेषण गर्ने गर्नुपर्छ, आजको भोली भन्ने हुदैन । जनतालाई आजको भोली परिणाम चाहिएको छ तर हामी ऐन कानुन बनाउने काममा अल्झनु पर्यो, जुन सतहबाट हेर्दा केही पनि देखिदैन । तर, ती भनेका प्रदेश संचालनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हुन् । यो अवधिमा हामीले ती सबै काम गर्यौं । ५० वटा त ऐन कानुनहरु नै बनायौं । लोकसेवा ऐन बनेर पदाधिकारीको नियुक्ति भयो । यो अधिवेशनबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन पारित गर्दैछौं । त्यसपछि कर्मचारी प्रशासनमा रहेका अन्योलहरु समाप्त हुन्छन् र नियुक्ति तथा सरुवा बढुवाको कामले एउटा ट्रयाक समात्छ अनि काम फटाफट हुन्छ । त्यसैले अहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा आन्तरिक कामहरुमा अल्झिएको थियो । अब बल्ल काम देखिन्छ ।
अज्ञात समुहद्वारा गोली हानी एक जनाको हत्या सोमवार, श्रावण ६, २०७६, १३:१८:००
जनता आवास कार्यक्रमबाट घर निर्माण शनिवार, चैत्र १६, २०७५, ०७:३१:००
आजको मौसम पूर्वानुमान यस्तो छ आइतवार, चैत्र २४, २०७५, ०७:१४:००
‘चैत मसान्तभित्रै वार्षिक कार्यक्रम सक्छौँ’
उद्योग क्षेत्र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउँछु
सबैतिरबाट हेपिएको च्याउ अब मुख्य कृषि उपज बन्दैछ
‘भिजिट नेपाल २०२० को परिणाम सन् २०२१ मा देखिन्छ’
‘ढिलासुस्ती युगको अन्त्य भएको छ, अब विकास निर्माणमा फड्को मार्छौं’
हामी फागुनमै विकास निर्माणका सबै काम सक्छौँ
प्रकाशकसमृद्धि न्यूज नेटवर्क प्रा.लि.
सूचना विभाग दर्ता नं. २४६/०७३-७४